THUJA GALBEEDKA: SIDA LOO DOORTO NOOCYADA JIILAALKA-ADAG EE GOOBTAADA - SOOSAARKA DALAGGA
Thuja galbeed - Tani waa dhar cadaan ah. Shimbiraha dulqaadka leh, baraf u adkaysta, waxaa jira geedo iyo geedo yaryar oo Yurub ah, waxaa laga keenaa Waqooyiga Ameerika. Markii hore wuxuu ku noolaa bangiyada wabiyada iyo tuulooyinka, oo aan hoos u dhigin daryeelka. Sidaa darteed, waxaa aad u caan ah beerta qurxinta. Thuja galbeedka waxay leedahay noocyo farabadan, ka hor intaanad dooran mid ka mid ah kuwa aad xiiseyneyso, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sifooyinkaa. Waxaan bixinnaa noocyada dhaxan ugu caansan ee iska caabida ee Western thuja.
Thuja galbeedka Smaragd
Geedka dhoobada oo qurux badan. Krone waa mid cidhiidhi ah, canonical, cufan, isku-dhafan oo isku dhafan, leh dhexroor ilaa 1.8 mitir. Cirbadaha waa cagaar mugdi ah oo cad, caleemo, shinni, dhalaalaya,. Dhirta geedka waxay ku dhowdahay shan mitir. Miraha waa burooyinkeeda caleemo qiyaasta 0.7 cm, waxay si tartiib ah u koreysaa, 5 cm oo ballaaran oo dhererkeedu dhan yahay 10 cm sannadkii.
Tui Smaragd waa noocyo kala duwan, laakiin iyada oo aan lahayn timo ayaa leh qaabka qalabka. Warshadu waa mid aan qabyo ahayn, muddo dheer noolaan (illaa 150 sano) oo si fiican u habboon xaaladaha cimilada ee kala duwan. Wuxuu ku koraa carrada oo dhan, laakiin wuxuu jecel yahay digaag iyo ciid leh lime. Xaaladaha magaalada way wanaagsan yihiin. Cadaadiska barafka oo aad u sarreeya, laakiin guga hore wuxuu ka jiraa qoraxdu.
Waa muhiim! Ka dib barafka, ruxin laanta si aanay u dhaawacin taajkii thuja, iyo guga waa lagama maarmaan in la daboolo geedka (gaar ahaan dhalinyarada) laga bilaabo qoraxda.
Way ka fiican tahay in lagu beero warshad meelo khafiif ah, inkasta oo ay u dulqaadanayso xayawaanka. Si fiican u ionizes iyo nadiifiso hawada. Waxay u koraan sida dhaqanka weelka, waxaa loo isticmaalaa abuuridda dayrka nool iyo walxaha gadaashiisa.
Ma taqaanaa? Tuyu Galbeedka Golden Smaragd waxaa lagu abaalmariyay bilad dahab ah oo lagu soo bandhigay "Green Life" 2008dii magaalada Warsaw.
Thuja galbeedka Columna
Geedkani waa dhuxushu. Muujinaysaa noocyada xiiriirka iyo noocyada dhakhso u koraya ee western thuja. Kala duwanaanshaha kaliya ee gaadhaya dherer ka badan siddeed mitir. Inta lagu jiro sanadka wuxuu koraa 20 cm oo dherer ah iyo 4-6 cm oo ballac ah. Wuxuu noolaa ilaa laba boqol sano. Taajku waa cidhiidhi, qoto dheer, kolonovidnaya, qiyaastii 1.5 m dhexroorka, cirbaddiisu waa cagaar madow, xajin, xitaa xilliga jiilaalka. Miraha - kooniska buni ee wareegsan.
Seeds waa cidhiidhi, flat. Thuja Kolumna waa mid aan qabyo ahayn, laakiin uma dulqaadanin carrada is dulfuulan waxayna u baahan tahay qoyan, oo aan ciidda ahayn. Waxay jeceshahay meelo iftiin leh oo leh muraayado, taajajirkoodu wuxuu noqon doonaa mid cufan oo dhalaalaya qorraxda, cufnaanta ayaa ku lumaysa hadhka. Waxay leedahay iska caabin adag oo qabow. Waa dhaqanka ugu badan ee qabow u adkeysta dhammaan noocyada of thuja columnar columnar. Wanaagsan abuurista deyr sare Faafin by gooyn.
Thuja galbeedka Fasciata
Thuja Fastygiata waa xayawaan xoog leh oo ku yaala dhir diiran oo leh dhuudh iyo cufan cufan. Dhirta dhirta ka badan lix mitir. Sanad walba wuxuu ku koraa 25 cm oo dherer ah, iyo 5cm width. Caleenta dhirta yaryar waa casaan-bunni ah, dadka waawaynna waa cawl-bunni ah oo siman. Cirbadaha waa qurux badan, xajiin, cagaarshaha cagaaran. Miraha - naadir, dhaadheer, madow oo ku saabsan 1 cm dherer.
Warshadu waa jiilaalka jiilaalka. Waxaa lagu talinayaa in lagu beero Thuya Fasigiata meelo iftiin leh ama iftiin leh. Prefers bacrin, qoyan, lime-leh ciidda. Noockan noocan ah wuxuu u muuqdaa mid aad u fiican oo ka mid ah beerashada hal koox iyo kooxeed, ku habboon qaababka quruxda badan ee qurxinta, beerashada dabbashooyinka. Warshadu waxay ku nooshahay ilaa laba boqol sano.
Thuja galbeedka Globoza
Qalabka wareegga ah ee loo yaqaan "Evergreen". Heerka dhirta waa 1.5 mitir oo isku mid ah. Waxay si tartiib ah u koreysaa: shan sintimitir oo dherer ah iyo shan meelood oo ah width. Lives 200 sano. Taajka dhirtu waa cufan, qoto dheer. Miraha waa wareegsan, bunni, ilaa 0.7 cm Cirbadaha waa cagaar madow, ballaaran, xajin.
Ma taqaanaa? Thuja galbeedka Globoza waxaa lagu yaqaanaa dhaqanka illaa 1874.
Waxaa loo isticmaalaa dayactirka duurka oo yar, hal abuur iyo mid lagu qurxiyo beeraha. Wuxuu jecel yahay meelo iftiin leh, dabayl la'aan ah iyo meelo har leh. Waxay jeceshahay qoyan, cusub, ciidda joogtada ah, dhoobada bacrin ah. Waxay u dulqaadataa dhar kala duwan.
Tani waa geedo cufan oo cufan leh oo toosan oo toosan, kor loo qaaday iyo caleemo qarsoon. Cirbadaha waa dahab, jaale-cagaaran, qolof, weyn. Kala duwanaanshaha kordhay. Warshad qaangaar ah waxay ku saabsan tahay mitir sare iyo 1.2 mitir ballaaran.
Nidaamka asaasiga ah waa mid dabacsan, ma u dulqaadanayo ciid cufan leh oo ka badan qoyaanka. Thuja galbeedka Golden Globe waxay jecel yihiin goobaha iftiinka leh iyo kuwa hoosta leh.
Waa muhiim! In hooska dhirta ayaa lumin doona midabkiisa dahabka ah, waxay noqon doontaa cagaar qani ku ah.
Dheecaan cusub, qoyan, dhoobo bacrin ah oo aan lahayn biyo joogta ah. Frost-u adkaysta. Ha iloobin in guga hore, marka ciidda aan weli la dhalaalin iyo qorraxda dhalaalaya dhalaalaya, dhirta dhalinyaradu waxay heli karaan cirbado gubanaya.
Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad ku daboosho agrofibre ama laamood dhirta, ilaa ay ciidda ka dhalatay. Waxaa loo isticmaalaa qulqulka hoose ama xudduudaha, loogu talagalay turjumaadda qowmiyadaha kala duwan.
Caleemaha quruxda leh ee cagaaran ee dhirta leh caleemaha khafiifka ah, cufan ku yaal, kuwaas oo daboolaya cirbadaha dhirta yaryar - taasi waa Teddy's Thuja. Kobaca waa mid aad u gaabis ah. Heerka dhirta toban-sano jirka ah waa 0.3 m, iyo width waa 0.4 m. Cirbadaha waa cagaar madow (dayrta - baalal), khafiif ah, irbad. Crohn spherical, waxoogaa dabacsan waqtiga.
Waxay u baahan tahay qoyaan ku filan (ma u dulqaadanayso hawada qalalan iyo carrada qallalan) iyo ciidda bacrin ah, laakiin waxay si deg deg ah uga koreysaa fara badan oo lumisa qaabkeeda. Waxaa lagula talinayaa sawirro yaryar oo yaryar, jardiinooyin, buuraha alpine, beeraha dhagaxa ah iyo geedo cagaaran. Waxay diyaariyaan goobo iftiin ama dhul leh. Waa qabow-adkaysi, laakiin guga hore wuxuu gubi karaa cirbadaha qorraxda, sidaa darteed ha ilaawin inaad qaadato taxadar ku habboon.
Thuja galbeedka Kholmstrup
Tani waa noocyo kala duwan oo ka mid ah Western thuja, oo leh qaab asal ah oo leh khudradda ciriiriga ah ee caanka ah iyo taajka cufan ee cufan. Warshadu waxay kori kartaa ilaa laba ama saddex mitir. Xitaa iyada oo aan la xiirin timo, waxay badbaadisaa qaabka muuqaalka caadiga ah. Wareegga hoyga 1.2 mitir.
Waa muhiim! Noocani waxay leedahay taajkii ugu darnaa ee noocyo kale oo ka mid ah galbeedka thuja.
Caleemaha dusha sare ee dhirta loo yaqaan 'evergreen'. Wuxuu kordhay sanadka 10-20 cm oo dherer ah iyo 4-6 cm width. Caleemaha waa mid gaaban, oo si qarsoodi ah u yaal. Cirbadaha waa dhuuban yihiin, cagaar mugdi ah, xajin, oo aan badalin midabka sanadka oo idil. Thuja Holmstrup waa wax aan qabyo ahayn oo ku saabsan ciidda, laakiin waxay jecel yihiin dhoobo qoyan oo bacrin ah, uma dulqaadan karo qalalan iyo ciidda overmoistened.
Si fiican u dhaji goobaha iftiinka ama hooska qayb ahaan. Thuja Holmstrup qorraxda qorraxda waa dhalaalaya oo cufan qaabka, hooska taajka waa khafiifin - ma ahan sawir-qaadis ku filan. Waxaa loo isticmaalaa koox koox iyo hal mar ah, dayrka nool, beerta beerta beerta iyo kuwa hooseeya. Si heer sare ah loola socdo xaaladaha magaalooyinka.
Thuja galbeedka Sankist
Mid ka mid ah noocyada ugu qiimaha badan ee western thuja leh midabka dahabka ah ee cirbadaha, ku habboon ku haboon abuurista derbiga dahabka ah-jaalle ah, oo si cad u eegaya asalka ah ee dhirta madow. Si quruxsan u qurxin dariiqyada iyo qaababka kala duwan ee dhulka. Tani waxay soo baxday qoryaha shimbir ee qoryaha waaweyn. Dhirta dhirta waa 3-5 mitir, iyo width - 1.5 mitir. Laamaheeda waa qotom iyo cufan, jajabin yar.
Cirbadaha cirridka ah, qurux badan, dhalaalaya, dhalaalaya, oo dahab ah oo dhir ah. Waxay si fiican u koraan qorraxda ama hooska qayb ahaan, oo waxay u beddelaysaa cagaaraha, taajku wuxuu noqonayaa dabacsanaan. Kala duwanaantu waa mid aan qabyo ahayn, laakiin waxay u baahan doontaa bacrin, ciid iyo qoyan. Warshad waa baraf u adkaysta, dabaysha u adkaysta, hooska-dulqaad. Wuxuu ka cabsanayaa qoraxdu xilliga gu'ga, sidaas darteed waa lagama maarmaan in la daboolo warshadda leh agrofibre ama xayawaanka dhogorta leh. Hoyga waxaa la saaraa marka ciidda buste.
Ma taqaanaa? Karl Linney sanadkii 1753 ayaa markii ugu horaysay ku sharaxday thuja galbeedka. Kadibna waxay heshay magaca nafleyda.
Thuja galbeed Reingold
Kobaca-koritaanka (kobaca sanadlaha oo keliya shan sintimitir) oo ku xoortay geedaha cirifka ah ee mugdi ama ukunta-qaabeeya. Markay tahay da'da toban jir waxay gaadho 1.5 mitir. Midabka cirbadaha ayaa isbedelaya: xagaaga, dahab dahabi ah, iyo xilliga qaboobaha - bunni. Laamo yar ayaa lagu daboolay cirbadaha, dadka waaweynna cirbadaha ayaa noqdaan kuwo caan u ah. Miraha - wareegsan, mugdi madow ku saabsan 0.7 cm.
Meelaha Prefers ayaa si fiican u iftiimaya iyo hooska qayb ahaan, meelo madow, cirbadaha ayaa lumiya midabka dahabka ah iyo jaalaha ah iyo cufnaanta sare ee taajka. Marka laga reebo ciidda bacrin ah oo qoyan, iyada oo aan la joogin biyaha. Tui Rheingold waxay leedahay qallal jiilaal sare ah. Guga hore, waxaa lagu talinayaa in lagu daboolo dhirta leh agrofibre ama laamiyo miraha si looga hortago qoraxdu. Waxaa lagu dabaqayaa goobo yaryar, dabbaaldegyo, jardiinooyin dhagax ah, oo loogu talagalay hal ama koox kooxeed.
Dhirta caleemaha qoyan ee cufan oo leh dhar dhul leh, ka dibna - ovoid. Dhererka ugu sarreeya waa ilaa laba mitir, ballaadhkuna waa 0.4 mitir. Cirbadaha waa cagaar, shinni. Caleemaha qaro, flat, toosan. Miraha waa yar yahay, xargaha bunka. Wuxuu jecel yahay ciidda qoyan iyo qoyan.
In carrada ciidda waa inuu dhoobo yar. Waxay si fiican u koraan qaybta hoose, laakiin waxay dooraneysaa meelo iftiin leh. Warshadu waa baraf u-adkaysi uuna uuna u dulqaadan. Lagu habboon yahay qurxinta goobaha daaqada, koox iyo beerashada hal geedka beerta. Beeritaanka suurtagalka ah ee weelasha sida qurxinta daaqadaha ama balakoonnada ballaaran.
Ma taqaanaa? Thuja galbeed waxaa loo isticmaalaa dhirta (timaha iyo jirka, phytobalms iyo saliida dhadhanka) iyo daawo (daaweynta cudurrada maqaarka, sida jeermis-dilaha iyo soo-qaadaha), iyo sidoo kale saliidaha lagama maarmaanka u ah cirbadaha.